ငွေလမင်း: ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲ (တဂ်)
ခုတလောမှာလည်း ဘလော့တခွင် တဂ်ပို့စ်ဆိုတာကြီး ခေတ်စားလှချေတယ်ပေါ့ဗျာရယ်၊ ဟိုနေ့ ကတစ်ခု တဂ်ပြီးသွားတယ်၊ ကိုအောင်(ပျုနိုင်ငံ)ရဲ့ တဂ်ပိုစ့်ဆိုတာလေ ဘလော့ဒေးဆိုလား အဲသလို တက်သ၍၊ မှတ်သ၍ ရေးသားတယ်ပေါ့ဗျာရယ်၊ အခုကျတော့ နတ်မင်း(ကျွန်တော် အခေါ်အားဖြင့်) ဘလော့နာမည် နတ်ဆိုး ဆိုတဲ့ အမောင်က ဘလော့ဆိုတာ ဘာလဲလို့ တဂ် လာပါသကောဗျာ၊ အဲဂလိုမင့်လေကြောင့် ယခုတခါ ရေးရပြန်ပါတယ်။
ဘလော့ဆိုတာကို စတင်ရေးကတည်းက၊ အွန်လိုင်းဒေရှင်နယ်ရီတွေမှာ ရှာဖွေဖူးခဲ့၊ မှတ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့၊ အခုမြန်မာပြည်ရောက်တော့ ကော်နရှင်အခတ်ခဲတွေ ရှိတော့၊ နောက်ထပ် ဘလော့ကာဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တယ်ဆိုတာ မသိရဘူး၊ ဒို့တိုင်းဋ္ဌာနီ တို့မြန်မာပြည်ဝယ်က ဒေရှင်နယ်ဒီတောင် အသစ်ဘယ်တော့မှ မလုပ်ကြဖူးဗျ၊ ဦးထွန်းငြိမ်းအဘိဓာန်တို့၊ လို့ခုနှစ်အို ရှစ်ဆွေး ဒေရှင်နယ်ရီတွေတော့ရှိတယ်၊ အဲဒီဟာတွေက ထန်းလျှက်တို့ ကွမ်းသီးတို့ ဘာတို့မပြောတတ်ရင်ရှာရတာလေ၊ အခု မြန် မာစာအဖွဲ့က ထုတ်တဲ့ အီးတူ မြန်မာကြီး ရှိလေရဲ့၊ ဘလော့ဆိုတဲ့ စကားလုံးမပါဘူး၊ သူတောင် မပါတော့ ၊ ဘလော်ကာဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ စဉ်းစားပေါ့၊ အဲကလိုရှားပါးတယ်။ အွန်လိုင်းဒေရှင်နယ်ရီကြည့်မယ်ဆိုပြီး အင်တာနက်ဆိုင် သွားတော့ အင်တာနက်ကော်နရှင်က ပတ်ကျိရဲ့ လျှင်မြန်မှု့နှုန်းနဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့၊ မသိခဲ့ရဘူး ဟူလိုတည်း။
စာအုပ်ဆိုင်သွားပြီး အောက်ဖိုစ့်ဒေရှယ်နယ်ရီကို ခိုးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် ကြံတော့ လူကမလစ်ဖူး၊ ဆိုင်ကလူတွေကလည်း အရိုက်မခံဘူး၊ အိမ်မှာရှိတဲ့ အောက်ဖို့ဒေရှင်နယ်ရီကြီးက နှစ်ကြိမ်မြောက် editလုပ်ထားတာ၊ ဘလော်ကာဆိုတဲ့ ဟာက လေးကြိမ်မြောက် edit လုပ်ထား တဲ့ အထဲမှာပါတယ်။ ဒါတောင် ဘလော့ဆိုတာလောက်ပဲ ဖွင့်ပြထားတယ်၊ ဘလော်ကာဆိုတာ ကိုဖွင့်မပြဘူး၊ BL0G- personal record that sb puts on their- အဲဒါကတော့ ဘလော့ဆိုတာ ပါပဲ၊ BLOG ဆိုတာက ကြိယာတဲ့ GG လို့ နောက်ကနေ ထည့်လိုက်ရင် N ဖြစ်သွားတယ်တယ်တဲ့။
ဘလော်ကာ ဆိုပြီး ဘာမှရှင်းလင်းပြမထားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူ့အောက်မှာ-BLOGOSPHERE ဆိုတဲ့ စကားလုံးတော့ပါလာတယ်၊ BLOGOSPHERE- all the blogs that exist on the internet ထားပါသူများတွေလို အင်တာနက်မှာ စာရှာမရတော့ ကိုကိုငွေတို့ကလည်း၊ ရတာလေးနဲ့မှုတ်ရတာ အဲလိုမှ မမှုတ်ရင်လည်း တဖူးဖူးနဲ့ထိုင်မှုတ်ဖို့ရှိတာပေါ့။
ဟိုအင်္ဂလိပ် စကားပုံလေးတခုရှိတယ်ပေါ့ ဗျာရယ် ၊ If you don’t ask me, I know. But if you ask me I don’t know. တဲ့ဗျာရယ်၊ မင်းမမေးရင် ငါသိတယ် ၊ မင်းမေးရင် ငါမသိတော့ဘူးတဲ့ ဟုတ်ပ အခု ဘလော့သာရေးနေတာ ဘလော့ဆိုတာဘာလည်းလို့လည်း မေးရော ဘယ်ကစ ပြောရမယ် မသိဘူးတော့ဘူးပေါ့ဗျာတို့ရယ်၊ သို့ပေမဲ့ မသိဘူးလား သိတာမှသိပ်သိတာပေါ့၊ ပြော စမ်း အင်းဟိုဟာ ဒီလိုလေဗျာ ဟိုဥစ္စာ ဟိုဒင်း ဟိုဟ၀ါလေဗျာ၊ အဲလိုဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့၊ မူရင်း အင်္ဂလိပ်အဖွင့်တွေမှာတော့၊ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံဖိုင်၊ ရုပ်သံဖိုင်၊ စာဖိုင်တွေကို အင်တာနက်ရဲ့ တထောင့်နေရာမှာ၊ သွားပြီး ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ နေရာကို ဘလော့ ပေါ့ဗျာရယ်။
အဲလို ဆုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားတတ်တဲ့လူကို ဘလော်ကာလို့ဆိုရပေမပေါ့၊ ဒါကတော့ စာပေလို ပြောတာ၊ လက်တွေ့မှာကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ စာပေတွေကြီး ကိုးကားပြောနေလို့က လည်း သဘာဝသိပ်ကျတာမဟုတ်ဘူးဗျာရဲ့၊ စာပေ၀ါသနာပါသူ စာဖတ်သူ သူတပါးကို ကိုယ်သိ ထားတဲ့ဟာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေသူလို့ စကားလုံးထွားထွားလေးတွေနဲ့ ဘလော်ကာများကို ချီး မြောက်ပြန်ရင်လည်း၊ ဘလော်မကာတဲ့လူတွေက သောက်ကြီးကျယ်လိုက်တာနဲ့ ဖြစ်ကုန် တော့မယ်လေ၊ တကယ်တန်း ဒီဘလော်ကာဆိုတဲ့ ဟာကြီးကို သရုပ်ခွဲရတာကလည်း ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် လောက် နီးနီးခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးတယ်။
ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၊ ဘလော့ကာဆိုတာ စုဆောင်းသူ လို့ပဲပြောပါရစေ၊ ဘာတွေစုဆောင်းမလဲ၊ ဓာတ်ပုံတွေစုမယ်၊ စာတွေစုထားမယ်၊ ရုပ်သံတွေစုမယ်၊ စုပြီးရင်း ငါဒါ တွေစုထားတယ်၊ မင်းတို့ကိုလည်းပြမယ်၊ ဘယ်နှယ့်လဲ ငါ့စုထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို မင်းသဘော ကျရဲ့လား၊ ကျတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ကွန့်မင့်လေးပေးခဲ့၊ သိပ်လှတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အခုလို တကူးတက ကူးယူပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘလော်ကာ ပါဘဲ။
ငါဗဟုသုတ ရမဲ့ဟာတွေလေး မှတ်သားထားတဲ့ စာတိုပေစလေးတွေ၊ ဒီနေရာမှာ စုထားတယ် လိပ်စာက www.@#$%%^$#@@.com မင်း သွားဖတ်ကြည့်ပါအုံး၊ ကြိုက်ရင် အောက်မှာ ကွန် မင့်လေးတစ်စောင်ရေးခဲ့၊ မင်းစုဆောင်းထားတဲံ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို မျှဝေတဲ့ အတွက် ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ကျရင်လည်း အဲလိုစာပေးလေးတွေ ထပ်ပြီးရှာဖွေတင်ပြနိုင်ပါစေ၊ အဲဒီကွန် မင့်လေးကို စာရေးသူကဖတ်ပြီး သဘောကျ၊ အော် ငါ့စာကို သူသဘောကျသွားပြီထင်တယ်၊ ငါ့ စာကလည်း တစ်ကယ်ကိုဗဟုသုတ ရစေတာကိုး…….ဟိုး…………ဟိုး………ဟိုး…………၊ ဟာ ဒီနေ့လူသာ ၁၀၀ကျော်လာတယ် ကွန်မင့်က ၂စောင်ပဲရပါလား၊ အဲဒါကြောင့် မရေးချင်တာဟွန်း $#$#@%$& အဲဒါ ဘလော်ကာ။
ငါသီချင်းကောင်းလေးတွေ ဒီနေရာမှာ စုထားတယ် မင်းလာနားထောင်ပါလား၊ မင်းကြိုက်ရင်လည်း ကြိုက်တယ်ဟေ့လို့ ကွန်မင့်ရေးခဲ့၊ မကြိုက်ရင်လည်း ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးလေး ကြိုက်တယ် ဆိုတာကို ပြောခဲ့မင်းကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေပါ ငါစုပေးထားမယ်၊ အဲဒါ ဘလော်ကာ။
ငါဒီနေရာမှာ ငါ့အမြင်တွေကို ရေးသားစုဆောင်းထားတယ် အဲဒါမင်းရဲ့အမြင်လေးနဲ့ ဖလှယ်ရ အောင်လာခဲ့၊ တစ်ကယ်လည်း လာဆွေးနွေးပြီးဆိုရော ဒေါသသံတွေ၊ ခပ်များများနဲ့ ငါလောက် လည်းမသိပဲနဲ့၊ သူကစာဘယ်လောက်ဖတ်တာကျနေတာပဲ၊ ဘာညာနဲ့ စိတ်ထဲက ဖြစ်နေသော် လည်း ၊ သီးခံသော လူကြီးလူကောင်းတို့ရဲ့ မူဟန်အတိုင်း ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပါ့မယ်ခင်မျာ၊ ကြိုး စားနေပါတယ်ရှင့် ဆိုပြီး ကွန်မင့်ရေးသူ အောက်ကနေ သွားပြီး ကွန်မင့်ပြန်ပေးတတ်သူ အဲဒါ ဘလော်ကာ။
နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတပါး ဘလော့ကာတွေက သူတို့ဘလော့မှာ သူတို့တင်ထားတာကို လာဖတ် ချင်ဖတ် မဖတ်ချင်နေ ငြင်းရင်ငြင်းခုန်ရင်ခုန် သတ်ချင်သတ်ဖြတ်ချင်ဖြတ် ကွန်မင့်ပေးချင်ပေး မပေးချင်မပေးနဲ့၊ ဝေဖန်ရင်ဖန် မဖန်ရင်နေ၊ ပစ်စုတ်ဒေ၀ ထားတတ်ကြပေမဲ့ မြန်မာဘလော်ကာ များကတော့ ဘလော့အလည်အပတ်ထွက်တယ်၊ သူတပါးရေးတာကို သွားဖတ်တယ်၊ ဝေဖန် တယ် လေကန်တယ်၊ ကွန်မင့်ပေးတယ်၊ အော်သူ့ဆီသွားမှ ငါ့ဆီလာမှပေါ့ ငါသွားလည်မှဖြစ်မယ်။
သူကနာမည်ကြီးဘလော်ကာ နာမည်ကြီးတဲ့ဘလော့တွေရဲ့ စီဘောက်မှာ ငါ့ ရဲ့ဘလော့ လင့်လေး ထားပေးခဲ့မယ်၊ အဲဒီဘလော်ကာဆီလာဖတ်တဲ့ လူတွေက ငါ့ဆီကို အလို လိုလိုက် လာလိမ့်မယ်၊ ဒါဆိုရင် ငါ့ဘလော့က လူသိများတဲ့ဘလော့ဖြစ်ပြီ စသဖြင့် လူစည်ကား ရာစည်ကားကြောင်း ၊ ကွန်မင့်ရရာ ရကြောင်း အသေးစိတ်ကအစ တခမ်းတနားလုပ်တတ်တာ ဘလော်ကာ။
ဘလော့မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဘလော့ကာရဲ့မွေးနေ့ ရီးစားနဲ့သူနဲ့ တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ စတဲ့ နေတွေကို ဂူဂယ်ကနေပြီးတော့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ မှာယူပြီးတော့ မစားရ၀ခမန်း ကျွေးမွေးပြီး အဖျော်ယမကာတို့ပါ လာဖတ်သူတို့ကို မှီဝဲစေတတ်တာ ဘလော်ကာ။
(တချို့ဘလော်ကာတွေဆိုရင် အပြန်ကို လေယာဉ်နဲ့ပြန်ချင်ရင်ပြန်၊ မြေအောက်ရထား ၊ ဇိမ်ခံသ ဘောင်္စတာတွေ နဲ့တောင် မွေးနေ့ပွဲအပြန်အတွက်စေတနာ ဗလပွနဲ့ စီစဉ်ထား တတ်သေးတယ်)
တခါတရံကျတော့ စာကရေးစရာမရှိ၊ ရေးတုန်းကလာမဖတ်ဘဲ ၊ ပိုစ့်မတင်တာ တစ်ပတ်လောက် ကြာပြီဆိုမှ ကိုကိုငွေ ပျောက်နေပါ့လား၊ မဒမ်နေကောင်းလား၊ စာတင်ကျဲတယ်ဟေ့၊ မအားကျဘူး ထင်တယ်၊ လာသွားတယ်နော်၊ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်း၊ မဒမ့်ကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရ တယ်ထင်တယ်၊ မဒမ်ရေ ကိုကိုငွေ့ကိုနာနာရိုက်ပါဗျို့၊ စဖြင့်သဖြင့် စသဖြင့် ကွန်မင့်မပေးပဲ၊ သူတို့လာသွားကြောင်းသိအောင် စီဘောက်မှာ အော်ပြီး အလည်လာတတ်ကြတာ ဘလော်ကာ။
ဘလော့မှာ လူတွေက များလာတော့ ဖောက်သည်ပျက်မှာကလည်းဆိုး၊ စာကရေးဖို့ကလည်း မရှိ တော့၊ ပုရွတ်ဆိတ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွား ဘီစကွတ်မုန့် ကို အမှုန့်ချေပြီးကြွေးတာကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူလာပြီး၊ ဤကဲ့သို့ မဟာ့မဟာကုသိုလ်တို့ကို အထူးပြုလုပ်ပါ၏ ဟူပြီး ဓာတ်ပုံအောက်မှာ ကြံဖန်ပြီးရေးသားပြီး ဆားချက်တတ်တာ ဘလော်ကာ ( ဟီး ဟီး တိုက်ဆိုင်မူရှိက ဆောရီး)။
ဟင်းချက်နည်းဖတ်၊ စာအုပ်ထဲကအတိုင်း အိုးလှလှလေးတွေနဲ့ ချက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်၊ ပြီးရင် အဲဒါ ဘာဟင်းပေါ့လို့အမည်တပ်၊ သူများအဲလိုဟင်းချက်ပြပြီဆိုရင်လည်း အောက်ကနေ အမရေ စား ချင်စရာလေးနော်၊ ဒီတခါ ကျောင်းပိတ်မှ လုပ်စားအုံးမယ်၊ (ဘာညာ နဲ့ သူစားသော်လည်း ကိုယ်ဝသကဲ့သို့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကွန်မင့်ပေးတတ်တာ ဘလော်ကာ။
စာပေ၀ါသနာပါပြီး၊ စာနယ်ဇင်းတွေမှာဖော်ပြဖို့ အခွင့်လမ်းမရှိလို့၊ ရှိသော်လည်း မရေးလိုလို့ ကိုယ်ရဲ့သုတ /ရသတွေကို ဘလော့ပေါ်မှာ ရေးသားရင်း နောင်တချိန်စာနယ်ဇင်းမှာ ဖော်ပြခံရ သည့်အခါ အတော်အတန် ကလောင်ထက်ပြီး တန်းဝင်သည့် စာရေးကောင်းသူတဦးဖြစ်စေဖို့ ဘလော့မှာ လက်သွေးနေတတ်တာ ဘလော်ကာ ။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေ၊ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ ရှားပါးတဲ့စာအုပ်တွေ၊ သွားခဲ့ရတဲ့ခရီးတွေ၊ ငါသိသလို စာဖတ်သူတွေ သိပါစေလို့၊ ရုံးတက်နေရင်း စာခိုးရိုက်၊ သူဋ္ဌေးကသိတော့ ဟောက်သော်လည်း သူဋ္ဌေးလစ်တာနဲ့ စာခိုးရှိုက် အားလပ်ရက်ကြတော့လည်း အပြင် မထွက်ပဲ၊ သူ့ရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို သူသိသလို သိစေချင်တာ ဘလော်ကာ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအစ မခိုင်မြဲတော့တဲ့ တခါသုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာ ချစ်ခြင်းထက် မုန်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းထက်၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးရခြင်း၊ ယုံကြည်မှု့ရှိခြင်းထက်၊ ကျဆုံးခြင်း၊ ရီမောခြင်းထက် ငိုကြွေးရခြင်းတွေ အဖက်ဖက် အရပ်ရပ်မှာ အားသာလို့မို့ သူ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ ယုံကြည်မှု့တွေ၊ ရီမောခြင်းတွေကို ပြည့်စုံစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ သူဖက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အနောက်တိုင်းစာအုပ်လေးတွေထဲက ၀တ္ထုကောင်းလေးတွေ သင်္ခန်းစာလေးတွေကို အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း လက်ညောင်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ့်စား ကြီးဒေါ်နွား အလကားကျောင်း ပေးတတ်တာ ဘလော်ကာ။
ပေါရာဏတွေ၊ စကားဟောင်းထုံးဟောင်းတွေ၊ ဖက်ရှင်တွေ၊ ရူခင်းတွေ၊ ကြားဖူးနားဝရှိတာတွေ၊ အကုန်လုံးကို သူ့စာကိုလာဖတ်သူတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် မိုးလင်းပေါက် ရေးပြတတ်ချင်ကြတာ
သူ့ရေးသားထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း လူများများ လာစေချင်တာ၊ ကွန့်မင့်များများရချင်တာ၊ အထင်မြင်လွဲပြီး၊ ကွန်မင့်ထားခဲ့သူတွေကို ငါကစေတနာနဲ့ရေးတာ သူကဒီလိုမြင်တယ်လို့ စာ ဖတ်သူတွေရဲ့ ကွန်မင့်လေးကိုဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းမှိတာ၊ စာဖတ်သူတွေရဲ့ ချီးမွှမ်းသံတွေကြောင့်၊ စာပေတွေ ထပ်ရေးချင်တာ၊ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ အစွမ်းကုန်ရေးသားပေမဲ့ စာဖတ်မဲ့သူမရှိလို့၊ ငါ့ကြိုး စားရေးပေမဲ့ သူတို့လာမဖတ်ကြဘူးဆိုတော့ ၊ ငါဟာ စာရေးတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ ငါအသုံး မကျဘူး ဆိုပြီးဝမ်းနည်းအားငယ်ပြီး၊ ဘလော့ရေးသားချင်းကို စွန့်ခွာသွားတတ်တာ ဘလော်ကာ။
ဘလော်ကာ ဘလော်ကာ ဘလော်ကာ ……..ကာ………………..ကာ အများကြီးပဲဗျာတို့ရယ်၊ ဘလော်ကာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဒေရှင်နယ်ရီမကလို့ ဘယ်အဘိဓာန်က သော်မှ အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင်ဖွင့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာရယ်၊
စာပေဖြစ်စေ သီချင်းတွင်ဖြစ်စေ ကဗျာတွင်ဖြစ်စေ ဓာတ်ပုံနှင့် ပန်းချီကားတို့တွင်ြ ဖစ်စေ၊သဒ္ဒဟုဆိုအပ်သော၊ အဖွဲ့အနွဲ့၊ အတ္ထဟုဆို အပ်သော ပြောချင်သော မက်စိပ်၊ သဘာဝတ္ထဟု ဆိုအပ်သော သဘာဝ ကျခြင်းမကျခြင်း အကျိုးရှိခြင်း မရှိခြင်း ထိုသုံးခုနှင့်ပြည့်စုံလျှင်၊ ပုံကောင်း၊ စာကောင်း၊ သီချင်းကောင်း ပန်းချီကောင်း ဖြစ်သ ကဲ့ သို့
ဘလော်ကာဆိုသည်မှာလည်း အဖွဲ့အနွဲ့ဆိုသော- သဒ္ဒ၊ အတ္ထ- ဆိုတဲ့မိမိဆိုလိုရင်းမက်စိပ်နဲ့၊ သဘာဝတ္ထ- ဟုဆိုအပ်သော သဘာဝကျခြင်း မကျ ခြင်းနှင့် အကျိုးရှိခြင်း မရှိခြင်းတို့ကို ညှိနှိုင်းရေးသားပြီး ၊ ကိုယ်ပိုင်းဘလော့ပေါ်မှာစုဆောင်းခါ စာဖက်သူတို့အား ပြန်လည်ဝေမျှတင် တင်ပြတတ်သူများကို ဘလော်ကာ ဟူသော စကားလုံးနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူစေလိမ့်မည်ဟု၊ ကိုကိုငွေမှ တသီးပုဂ္ဂလ အမြင်ရှိပါကြောင်း၊
ပြောကြားရင်း နတ်မင်းရဲ့ ဘလော်ကာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ တဂ်ပိုစ့်ကို နိဂုံးချုပ်ပါကြောင်း။
(ဒီပိုစ့်မှာ ရေးသားခဲ့ခြင်းများသည်၊ ပျော်ရွှင်လို ရီမောလို၍သာ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ တိုက်ဆိုက်မှု့များ အလျှင်းရှိခဲ့ပါလျှင် ကိုကိုဘလော်ကာ မမဘလော်ကာ တီတီဘလော်ကာနှင့် အန်ကယ်ဘလော်ကာ များမှ အမိုက်အမဲလေးမို့ခွင့်လွတ်စေလိုပါကြောင်း )
ဘလော့စာရှု့သူများ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း၊ ငွေလမင်းတို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်၊ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေချင်မျာ။
Posted by ငွေလမင်း at 9:56 AM
ကော့မန့်ပေးသည်။ ဘလော့ကာ :D
ဖတ်သွားပဗျို့... သိပ်ကောင်းတယ် ကိုငွေရေ...
မဒမ်ငွေကော.. ကိုငွေကော.. နေကောင်းကြတယ်မလား...
ဘလော့ဂါရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေ ကောင်းလိုက်တာ အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရှင်းပြထားတော့ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ထင်ပေါ်တယ်။ ပို့စ်အသစ်မြင်တိုင်း ရောက်ပါတယ် ကိုငွေ မဒမ်ငွေတို့ရေ။
ဘာ အခုမှ အမိုက်အမဲလေးတွေဆိုပြီးတော့ ခွင့်လွှတ်ခိုင်းနေရတာလဲ။ ပြောတုန်းက ပြောပြီးတော့။ ဒီလိုနဲ့ ရရိုးလား ဟားဟား။
ကျနော်ကတော့ ပြန်မပြောတာက ကွန်မန့်အပေါ်မှာ ဆင့်ပွားခြင်းကို ရှောင်ချင်လို့ ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဖတ်ဖတ် ကိစ္စ မရှိရင် စီဘောက်မှာ စာမရေးခဲ့ပါဘူး ၊ ကွန်မန့် နေရာမှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားရမှုကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ လေးစားသမှုနဲ့ပါ။
အင်းလေ. . . လူတိုင်းတော့ ဘယ်တူမလဲဗျ နော့။
ငွေလမင်း ရဲ့ အမြင်လေး ကိုဖတ်သွားပါတယ်
ရောက်တယ် ကိုမဒမ်ငွေလမင်း စန်းစန်းတင့်ဖြစ်နေသေးလား :P
ဟေ့...ဟေ့...ဒီမှာ ခေါ်နေတာ မကြားကြဘူးလား ငွေလမင်းတို့...
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးဂျီးဒေါ်နွားကျောင်းတယ်ဆိုတာ ဘုကို ပြောတာလဲဗျ...ဟမ်...ပြန်ပြောချမ်းဘာ
ကိုငွေ၊ မဒမ်ငွေတို့ရယ် မင်္ဂလာပါ။ ဖတ်ပြီးတော့ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်ဗျာရယ်။ ဖတ်လို့လည်း ကောင်းတယ်ဗျာရယ်။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာရယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ပေါ်စာရေးနေတာမို့ ဘလော်ဂါဘဲခေါ်ကြတာပေါ့။
ဘလော်ဂါ ကိုကိုငွေနဲ့ မဒမ်ငွေတို့လည်း ပျော်ပျော်ကြီး ဘလော်ဂါဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်းနော်
အဟီး.. ကိုယ်လည်း ဂျီးတော်နွားကျောင်းတဲ့အထဲ ပါနေပြီထင်ပါ့.. ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့စာလေးတွေကို နှစ်သက်မိပြန်တော့လည်း ပြန်ပြီးဝေမျှချင်တဲ့ စေတနာလေးကစေ့ဆော်လေတော့ အစားပျက် အလုပ်ပျက် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ဘာသာပြန်မိသွားတာပဲ။
အကုန်လုံးကို သိနေပါရောလား ဗျာတို့ရယ်။
ဘလော့ဂါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရင်တော့ ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေက ထိပ်ပြေးနေမယ်ထင်ပါ့။
အိမ်း..မှန်ပေသကွဲ့ ..ကောင်းပေသကွဲ့ ..ကိုကြီးငွေလမင်း အားလေးစာခင်မင်လျှက်...
စုံလို့ပါပဲလား အကိုရေ :):) မိုက်တယ် မိုက်တယ် ...လို့ အဲဒါမှ ဘလော့ဂါ...:)
ကိုကိုငွေ ဘာတွေလုပ်နေလဲ မဒမ်ငွေ ရောနေကောင်းလား
ပို့စ်တွေ တက်မလာတာကြာပြီ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာလား ကြာပါတယ် မဒမ်ငွေ ရာ ကိုကိုငွေ့ကိုပါ သုပ်စားပြစ်လိုက်;;;;D
ဒီနေ့တော့ အရမ်းရယ်ရတယ် အကိုရာ အခုလေးတင် သူကြီးမင်း အိမ်ကနေရယ်ပြီး ပြန်လာတာ အကို့အိမ် ကိုရောက်တော့ ထပ်ရယ်ရပြန် ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ရေးရေး ဒီနေ့ရယ်ရခြင်းလေးတွေ အတွက်တော့ ကျေးဇူးဗျာ။
ဘလော့ဂါ အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။
အာပေးသွားပါတယ် ကို/မ မဒေငွမ်ရေ